Ny androaniko | Jolay 2016
[Lasalasa fisainana ] 16 Jolay, 2016 08:41
Tsy mamisavisa ny ratsy fa miomankomana raha sanatria.
Isan'ny resaka tsy zakan'ny Malagasy ilay manafatrafatra hoe raha sanatria aho maty dia izao sy izao no mba ataovy. Toa hitako ihany ny hivingivindohandrizareo tamin'ny fotoana nanoratan'i Ratsimiseta ilay tononkalo malaza "Rehefa maty aho". Nefa anie dia ny Ntaolo ihany no milaza fa ny aina tsy mifametra e !
Tsy ny amin'ny lafiny materialy fotsiny anefa fa eo amin'ny fanehoana fitiavana ihany koa, na amin'ny fihetsika na amin'ny famborahana izany mihitsy.
Izaho tena mpamela hafatrafatra sy mpiteniteny an'io hoe raha sanatria ka dila tampoka aho dia tsarovy fa tiako be nareo, tiako be ianao, dia mba zao sy zao no faniriako faramparany raha azo atao.
Kanefa dia impiry aho no mifanjinja amin'ny havana sy namana mihitsy satria ny setriny mba azo dia hoe "aza mirediredy eo 'ty !"
Izaho manko dia milaza foana hoe ianareo no mba ametrahako azy fa izaho tsy manam-bola omena ny "notaire" izay karamaina hampirina azy itony, toy ny aty an-dafy. Efa haintsika ihany fa tsy antsika ny segondra manaraka : mety avy mivanitika aminareo eto aho, hoy aho, dia mitsangana saingy mety hiakatra tampoka ny tosi-dràko dia hiankarapoka aho dia izay ; na hidina ny tohatra aho avy manao veloma anareo dia mety hisolifatra dia hidona ny lohako dia ho vita eo ny amiko, sns.
Dia mbola ao koa ny tranga toa itony fanahafihan'ny mpampihorohoro itony. Efa maro izay "Je suis" niombonan'ny mpisera eny amin'ny tambazotra sosialy izay an !!! Indrisy fa tamin'ity "Je suis Nice" ity dia nisy reny malagasy vao erotrerony tokoa isan'ny namoy ny ainy tao - handry am-piadanana anie izy, ary mirary fiononana ho an'ny fianakaviany sy ireto zanany kely anankiroa. Ka iza tokoa moa no nanampo fa haka fahafinaretana hijery afomanga no nivoahana ny trano nefa dia fahafatesana no niandry teny amoron-dranomasina !
Tsy hoe mamisavisa ny ratsy hiavian'ny soa. Tsy izany mihitsy satria tsisy maniry ny ratsy ho avy saingy isan'ny trangam-piainana daholo izany. Fa miomankomana ihany, amin'izay raha tonga ny lera dia hiverina ao an-tsainareo daholo izay "redirediko" rehetra izay.